Galmudug oo shaacisay in Al Shabaab ay qabsadeen deegaanno hoostaga Gaalkacyo
Maamulka Galmudug ayaa sheegay in deegaanno hoostaga Magaalada Gaalkacyo ee Xarunta gobolka Mudug ay gacanta ku dhigeen Ciidamo ka tirsan Al Shabaab oo ay sheegeen inay si aad ah u hubeysan yihiin.
Wasiirka Arrimaha gudaha iyo amniga ee Maamulka Galmudug Abshir Diini Cawaale oo maanta Waraysi siinayay Idaacadda Shabelle ayaa waxa uu sheegay in Tuulada Bud-bud oo ka tirsan gobolka Mudug ay la wareegeen Ciidamo ka tirsan Al Shabaab oo si aad ah u hubaysan kuwaasi oo uu tilmaamay inay ka yimadeen qeybo ka mid ah gobolada dhexe ee dalka Soomaaliya.
Wasiirka ayaa sheegay in Ciidamadaasi ay hogaaminayaan Saraakiil ka tirsan Kooxda Al Shabaab islamarkaan ay wataan gawaarida dagaalka, wuxuuna xusay in Maamulka Galmudug uu wado qorshayaal lagu doonayo in lagu weeraro deegaanno hoostaga Bud-bud, maadaama Kooxda Al Shabaab ay doonayaan inay galaan halkaasi.
Warar hoose ayaa waxa ay sheegayaan in Ciidamadaasi uu hogaaminayo Afhayeenka Ciidamada Al Shabaab Sheekh C/casiis Abuu Muscab kuwaasi oo la tilmaamay in u jeedkoodu uu yahay inay u gudbaan deegaannada maamulka Puntland si ay falal ammaan darri ugu gaystaan.
Hadalka kasoo baxay Maamulka Galmudug ayaa waxa uu imanaayaa xilli inta badan shacabka Mudug ay hadal hayeen in deegaanno ka tirsn gobolkasi ay galeen Ciidamo ka tirsan Al Shabaab iyo Saraakiil hoggaaminaysa oo doonaya inay abuuraan falal ammaan darri.